सामान्य गल्ती व्यवसायहरू मार्केटिंग स्वत: प्लेटफर्म छनौट गर्दा बनाउँछ Martech Zone
A मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म (MAP) कुनै पनि सफ्टवेयर हो जुन मार्केटिंग गतिविधिहरूलाई स्वचालित गर्छ। प्लेटफर्मले सामान्यतया ईमेल, सोशल मिडिया, लीड जेन, डायरेक्ट मेल, डिजिटल विज्ञापन च्यानल र उनीहरूको माध्यमहरूमा स्वचालन सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। उपकरणहरूले मार्केटिंग जानकारीको लागि केन्द्रीय मार्केटिंग डाटाबेस प्रदान गर्दछ जसले गर्दा विभाजन र निजीकरणको प्रयोग गरेर सञ्चार लक्षित गर्न सकिन्छ।
लगानीमा ठूलो फिर्ती हुन्छ जब मार्केटि auto स्वचालन प्लेटफर्महरू सही ढ and्गले लागू गरिन्छ र पूर्ण रूपमा लिभरेज गरिन्छ; यद्यपि धेरै व्यवसायहरूले आधारभूत गल्ती गर्छन् जब उनीहरूको व्यवसायको लागि प्लेटफर्म छनौट गर्दछन्। यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन मैले हेर्न जारी राख्दछु:
गल्ती १: नक्शा ईमेल मार्केटिंगको बारेमा मात्र होईन
जब मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्महरू पहिलो विकास गरिएको थियो, प्राय: केन्द्रीय फोकस स्वचालित ईमेल संचारहरू स्वचालित थियो। ईमेल एक उत्कृष्ट ROMI को साथ एक सस्तो च्यानल हो जहाँ व्यवसायहरूले ट्र्याक गर्न र उनीहरूको प्रदर्शन रिपोर्ट गर्न सक्दछन्। यद्यपि अब ईमेल एक्लो मध्यम मात्र होइन। मार्केटिंग भनेको सहि ग्राहकलाई सही समयमा सही सन्देश पठाउँदै छ - र नक्शाले यसलाई सक्षम गर्दछ।
उदाहरण: मैले हालसालै एक ग्राहकलाई उनीहरूको वेबिनार चलाउन मद्दत गरें जसले उनीहरूको मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्मको लाभ उठाउँदछ। पूर्व घटना पंजीकरण, घटना दिन चेक-इन देखि पोस्ट-कार्यक्रम अनुवर्ती - यो दुबै ईमेल र प्रत्यक्ष मेल च्यानलहरूमा एक स्वचालित प्रक्रिया थियो। एक ईमेल मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्मले मात्र हामीलाई हाम्रो उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दैन।
गल्ती २: म्याप फराकिलो मार्केटिंग उद्देश्यसँग पigned्क्तिबद्ध छैन
मेरो अनुभवको वर्षहरूमा ग्राहकहरूसँग नजिकबाट काम गर्दा, प्रत्येक ग्राहकको आफ्नो प्लेटफर्म प्राथमिकतामा उनीहरूका विचारहरू थिए। अधिक पटक, सी-स्तर निर्णय निर्माता भारी प्लेटफर्मको लागतमा भर पर्दछ र अरू केहि पनि होइन। र जब उनीहरूको मार्केटिंग टेक्नोलोजी स्ट्याक अडिट गर्दै, हामीले पत्ता लगायौं कि कहाँ प्लेटफर्महरू कम प्रयोग गरिएको थियो - वा अझ खराब - प्रयोग नगरौं।
पहिलो चीज जुन सँधै सोध्नु पर्दछ मानचित्र छनौट गर्दा:
Marketing महिनामा तपाईको मार्केटिंग गोल के हो?
मार्केटिंग अटोमेसन कुनै काल्पनिक बज शब्द होइन न त यो चाँदीको बुलेट हो। तपाईको मार्केटिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने यो उपकरण हो। त्यसकारण, तपाइँको मार्केटिंग उद्देश्यहरूको साथ सीधा पign्क्तिबद्ध गर्न र तपाइँको मुख्य प्रदर्शन सूचकहरू (KPIs) मापन गर्न तपाइँको MAP सेटअप गर्न के चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस्।
उदाहरण: एक ई-वाणिज्य ग्राहक ईमेल च्यानलहरू मार्फत राजस्व वृद्धि गर्न चाहन्छ किनकि त्यो केवल हालसालको व्यवसायहरू प्रयोग गर्ने च्यानलहरू र तिनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा ठूलो डाटाबेस छ। तिनीहरूलाई अटोमेसनको आवश्यकता पनि पर्दैन ... ईमेल सेवा प्रदायक (ESP) अनुभवी ईमेल मार्केटिंग विशेषज्ञसँग मिलेर सबै परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्दछ। AP गुणा बजेट बर्बाद गर्नु के अर्थ के हो?
गल्ती:: नक्शा कार्यान्वयन लागतहरूलाई कम महत्त्व दिईन्छ
तपाईको टोली कत्तिको जानकार छ? प्रतिभा एक MAP मा लगानी गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हुन सक्छ, तर सामान्यतया धेरै व्यवसाय द्वारा छनौट गरिरहेका छन् बेवास्ता। तपाइँको मार्केटिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, तपाइँलाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले मञ्चलाई पूर्ण रूपमा प्रबन्ध गर्न सक्दछ र यससँग तपाइँको अभियान कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।
मेरो आधा भन्दा बढी ग्राहकहरूले यसको लाभ उठाउन प्रतिभा आन्तरिक बिना एक प्लेटफर्म छनौट गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू यसको व्यवस्थापन गर्न मार्केटिंग एजेन्सीलाई भुक्तान गर्छन्। त्यो खर्चले लगानीमा फिर्ती कम गर्दछ र यसलाई घाटा पनि पार्न सक्छ। एजेन्सीहरू प्रायः तपाईको MAP कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन महान हुन्छन्, तर धेरै सानोदेखि मध्यम-आकारका व्यवसायहरूको लागि निरन्तर रोजगार दिनको लागि यो तुलनात्मक रूपमा उच्च लागतको हुन्छ।
अन्य व्यवसायहरूले आफ्नो-इन-हाउस टीमलाई अप-स्किल गर्न छनौट गर्छन्। बजेट प्रक्रियाको क्रममा, यद्यपि धेरैले आफ्नो मार्केटिंग बजेटमा प्रशिक्षण लागतहरू योजना गर्न बिर्सन्छन्। प्रत्येक समाधानको लागि महत्त्वपूर्ण कौशलसेटहरू आवश्यक हुन्छ; त्यसकारण, प्रशिक्षण लागत फरक हुन्छ। मार्केटो, उदाहरण को लागी, अष्ट्रेलिया मा लगभग $ 2000 AUD को आधारभूत प्रशिक्षण लागत संग एक प्रयोगकर्ता मैत्री समाधान हो। वैकल्पिक रूपमा, बिक्री बल मार्केटिंग क्लाउड प्रशिक्षण नि: शुल्क छ ट्रेलहेड.
जब तपाईं मञ्चमा निर्णय लिनुहुन्छ तब तपाईंको मानवीय सम्पत्ति र उनीहरूको प्रशिक्षणको लागतलाई विचार गर्नुहोस्।
गल्ती 4: MAP ग्राहक विभाजन प्रयोगमा आयो
नक्शाले तपाईको सम्भावना र ग्राहकहरूलाई कुनै पनि प्रकारले वर्गीकरण गर्न सक्दछ तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। यो केवल तपाईसँग भएका डेटा तत्त्वहरूको बारेमा मात्र होईन, तर ग्राहकलाई उनीहरूको यात्रा वा मार्केटिंग लाइफसाइकलमा रहेको सही तरिकाले लक्षित गर्दै। सहि सन्देशलाई सही समयमा पठाउनु तिनीहरूको ग्राहक व्यवहारमा निर्भर गर्दै ग्राहकको मान बढ्नेछ ... तपाईंको आरओआईमा ड्राईभ गर्दै।
थप रूपमा, धेरै मुख्य नक्शा विक्रेताहरू A / B परीक्षण अभियान परिणामहरू अनुकूलन गर्न गर्छन्। यसले तपाइँको मार्केटि results परिणामलाई बृद्धि गर्दछ ... समय र सन्देश प्रवाह गरेर तपाइँ तपाइँको ग्राहक पठाउँदै। ग्राहक खण्डहरू र उनीहरूको व्यवहारलाई लक्षित गर्दै, र प्रत्येक डेमोग्राफिक समूह विभाजित गर्दा ग्राहकहरूको व्यवहार भिन्नताको फाइदा लिनेछ।
सही MAP समाधान छनौट गर्न कहिल्यै सजिलो भएको छैन र विचारहरू प्लेटफर्मको लागतभन्दा बाहिर हुनुपर्दछ। अवश्य पनि, त्यहाँ धेरै अन्य कारणहरू छन् जुन तपाईंको MAP लगानीले डेलिभर गर्न सक्दैन… तर कम्तिमा यी4साधारण गल्तीहरूले तपाईंको लगानी पूर्ण रूपमा साकार गर्ने सम्भावनालाई सुधार गर्दछ!
यदि तपाईंलाई एक छनौटमा थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी मद्दत गर्न खुशी छौं।
टैग: ग्राहक व्यवहारईमेल स्वचालनईमेल विपणन स्वचालनघटना मार्केटि auto स्वचालनकुञ्जी प्रदर्शन संकेतकहरूनक्सामार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्ममार्केटिंग प्रशिक्षणमोबाइल मार्केटिङरय
बब क्रफ्ट एपीएसी क्षेत्र भित्रका अनुभव मार्टेक नेता हुन्, विगत years बर्षमा धेरै उद्योगहरूमा १ 15 भन्दा बढी ग्राहकहरूसँग काम गर्दै।